काठमाडौं । वर्तमा विशवमा आधुनिक अर्थतन्त्रको मुख्य ईन्जिन भनेको नै शहरहरु हुन् । हाल विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या शहरमा बसोबास गरिरहेको छ । पछिल्लो समय शहरीकरण अभुतपूर्व रुपमा वृद्धिको गतिमा लम्किरहेको छ । जसका कारण वर्तमान विश्वका प्रमुख शहरहरुमा व्यापक फेरबदल आइरहेको छ । तीब्र गतिमा भएको परिवर्तनका कारण अहिले विश्वका मुख्य र महत्वपर्ण भनिएका शहरहरु भविष्यमा धेरै फरक हुने आँकलन गरिएको छन ।
‘अक्सफोर्ड ईकोनोमिक्स’ ले भविष्यका मुख्य १० शहरहरुको बारेमा गरेको पछिल्लो अध्ययनले सन् २०३५ सम्ममा आजका मुख्य शहरहरुको आकार, जनसंख्या तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनसमेत अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । सो अध्ययनमा आजका मुख्य शहरहरुको आगामी १५ बर्षमा हुने परिवर्तनको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा प्रमुख १० शहरहरु
सन २०३५ सम्ममा केही शहरहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ‘जीडीपी’को आकार बढ्नेछ । अमेरिकाकै ३ शहर न्यृयोर्क, लस एन्जलस र सिकागोको जीडीपीमा भारी परिवर्तन आउनेछ । अध्ययनका अनुसार यी ३ शहरको २ दशमलव ५ ट्रिलियन डलर बराबरको जीडीपी बैंकिङ र वित्त क्षेत्रले ओगट्नेछ । यस्तै चीनका ४ शहरहरुको जीडीपीमा पनि उत्तिकै मात्रामा परिवर्तन आउनेछ ।
साथै लण्डन, पेरिस र टोकियो भने टप टेनका अन्तिम ३ मा पर्नेछन । हाल टोकियो भने जीडीपीको आधारमा पहिलो स्थानमा रहेको छ । टोकियोको सन २०१९ मा जीडीपी १ दशमलव ६ ट्रिलियन अनुमान गरिएको छ । यस्तै सन २०३५ सम्म उक्त १० शहरको मात्रै जीडीपीको आकार १३ दशमलव ५ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्ता महानगरहरुको समुहलाई ‘मेगारेगियनस’ भनिन्छ जसले आर्थिक गतिविधिमा ठुलो हिस्सा ओगटेका हुन्छन ।
जनसंख्याको आधामा प्रमुख १० शहरहरु
भविष्यमा जनसंख्याको आधामा पनि केही शहरहरुले ठुलो फड्को मार्नेछन । अध्ययनका अनुसार सन २०३५ सम्ममा विश्वको पुर्वि क्षेत्रको केही शहरहरु धेरै जनसंख्या भएको शहरहरुमा गणना हुनेछन ।
जसमा एशियाका मुख्य ७ ओटा शहरहरु पर्दछन । जबकी ३ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको जकार्ता शहर हाल धेरै जनसंख्या भएको पहिलो शहरको स्थानमा रहेको छ । जसले सन २०३५ सम्ममा धेरै जनसंख्या भएको र ईन्डोनेशियाको राजधानीको शाख गुमाउने भविष्यवाणी गरिएको छ ।
समुन्द्री तह वृद्धि र पानीको कमजोर पूर्वाधारका कारण जकार्ता शहर खुम्चिँदै गएको छ । जसको कारण ईन्डोनेशिया सरकारले आफ्नो राजधानी समेत जकार्ता बाट बोर्नियो आईसल्याण्डमा सार्ने योजना बनाएको छ । यस्तै अफ्रिकाको कीनसासा र लागोस भने १ करोड जनसंख्या सहित मेगासिटीको स्थानमा रहेका छन । यी शहरहरु यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पहिलो स्थानमा हुने योजना बनाईरहेका छन ।
जनसंख्या कुनैपनि देशको ग्रोथको प्रमुख संयन्त्र मानिन्छ । उदाहरणको लागि नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतले पछिल्लो समय काम गर्ने उमेरसमुहको बढ्दो जनसंख्याको खाका तयार पार्दैछ । जसको कारण भारतका केही शहरहरु अबको केही बर्षमा बढ्दो शहरको रुपमा गणना हुनेछन ।
बार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा प्रमुख १० शहरहरु
आर्थिक वृद्धिको आधारमा शहरहरुलाई तुलना गर्दा शहरहरुको केही शुद्ध असमानताहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ । हाल केही मुख्य शहरहरुको बार्षिक जीडीपीको वृद्धिदर २ दशमलव ६ प्रतिशत छ तर प्रमुख १० शहरहरुले भने यसको सिमा नाघिसकेका छन ।
अध्ययनका अनुसार बार्षिक जीडीपीको वृद्धिदर २ दशमलव ६ प्रतिशतको सिमा नाघ्ने प्रमुख १० शहरहरु एशियामै अवस्थित छन । जसमा तिव्र आर्थिक वृद्धि भएका ४ शहरहरु चीनमा, ४ शहरहरु भारतमा र २ शहरहरु दक्षिण एशियामा अवस्थित छन ।
सन २०३५ सम्म भारतको बैंगलोर शहर ८ दशमलव ५ प्रतिशत बार्षिक वृद्धिका साथ पहिलो स्थानमा रहनेछ । बैंगलोरलाई प्रविधि स्टार्टअपको क्षेत्र पनि मान्न थालिएको छ ।
यस्तै जकार्ता ५ दशमलव २ प्रतिशत बार्षिक वृद्धिदरसहित दोस्रो स्थानमा रहने छ । साथै चीनको सांघाई शहर तेस्रो स्थानमा परेको छ । पछिल्लो समय सांघाईलाई विश्वकै व्यस्त बन्दरगाहको रुपमा पपनि लिने गरिन्छ । अध्ययनका अनुसार सन २०३५ सम्ममा सांघाईको बार्षिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
जीवनमा पैसा ठूलो कि मित्र ? एक मित्रले अर्को मित्रलाई दिए चिठ्ठामा परेको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ
कति पाउँछन भारतमा बैंकका सिइओले तलब ? यी हुन् भारतमा सबैभन्दा बढी तलब पाउने ४ सिइओहरु
ट्विटरमा ‘बिटक्वाइन काण्ड’ : थुप्रै अर्बपति, नेता र कम्पनीका ट्विटर खाता ह्याक गरेर लाखौं डलर चलखेल
कोरोनाले सिंगापुरको अर्थतन्त्र ४१ प्रतिशत खुम्चियो, एक दशकपछि पहिलोपटक अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ
म्यानमारको खानीमा पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ११३ पुग्यो, थप मानिस हराइरहेको आशंका
कराँचीको स्टक एक्सचेन्जमा हमला, विस्फोटक पदार्थ बोकर भवनभित्र छिर्न खोज्ने पाँच जनाको मृत्यु
चिनियाँ सेनासँगको भिडन्तमा ज्यान गुमाउने भारतीय सैनिकको सङ्ख्या २० पुग्यो, चीनले दियो भारतलाई अझै गम्भीर चेतावनी